February 2014 ~ Thinksphere
7:30 AM Essays, Political Commentaries No comments
उच्च शिक्षा हासिल गरेका आजका अधिकांश शिक्षित खास खास सूत्र कण्ठस्थ बनाएका यान्त्रिक टेप हुन्। सूत्रवाला शिक्षितहरूको मुख्य उद्यम नै स्रोतसाधनमाथि हालीमुहाली भएका मुट्ठीभर धनाढ्यहरूको मुन्सी बन्नु हो। र, बिलकुल व्यक्तिगत लाभ-हानिको बहीखाताका रखवाला बन्नु उनीहरूलाई दिइएको अर्को मुख्य जिम्मेवारी हो। आलोचनात्मक चेतना विस्तार गर्ने मान्छेको सामथ्र्य ठुन्क्याउनुमा आजको उच्च शिक्षाको सफलता मापन हुन्छ। चिन्तनको अत्यधिक बोन्साई गरेर वर्तमान उच्च शिक्षाले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गरसिकेको छ।
युवालाई एकोहोरो नाफा कमाउने र सम्पत्ति थुपार्ने सीप सिकाइरहँदा, त्यो हजारौँका रगत र पसिनाको मुल्यमा मात्रै सम्भव भएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नमा पनि उत्तिकै पोख्त बनाइन्छ। नाफा कमाउने युक्ति कति सही वा गलत, प्रश्न गर्नु भनेको राजनीति गर्नु हो। राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो। उनीहरूलाई सूत्र दिइएको हुन्छ, 'ह्वाइट कलरहरूले फोहोरबाट जोगिनुपर्छ।' नवउदारवादको तन्दुरमा पकाइएको उच्च शिक्षाको यस्तो रोटी नेपाली युवाले बडो स्वादले सेवन गररिहेका छन्। यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन काण्डलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू।
प्रा डा गोविन्द केसीले गरेको अनशनलाई डिन फेर्ने कसरतका रूपमा मात्र व्याख्या गर्ने उपक्रममा धेरै रमाए। ठूला विद्वान्हरू पनि निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा भ्रष्टाचार हुनु 'नराम्रो कर्म' हो भन्नमा बढी व्यस्त भए। सतहमा देखिएका तमाम विकृतिहरूको जड शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण थियो। माफियाहरू मौलाउनुका पछिल्तिर एकोहोरो नाफा कमाउने उद्देश्य हुनु सबभन्दा ठूलो कारक थियो। केही धनाढ्य र नवधनाढ्यको पोल्टामा सम्पत्ति थुपार्ने उद्यम निष्कंटक चल्नु नै गोविन्द केसीको बूढो शरीरले दुःख भोग्नुको मुख्य कारण थियो। कसैले प्रश्न गर्ने ल्याकत देखाएन। वा, यी प्रश्न सबैलाई फजुल लागे। भूमण्डलीकरणबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको बोन्साई-बौद्धिकताको उत्तम दृष्टान्त बन्यो, डिन काण्डलाई हेर्ने विद्वत् दृष्टिकोण।
सतहमा हेर्दा केसीको आन्दोलन सफल भएको देखियो। ट्वीटरको दबाबले आन्दोलन सफल भएको भ्रममा आफ्नै काँधमा धाप मार्नेको संख्या पनि यथेष्ट थियो। पत्रिकाका थुप्रै पृष्ठ प्रशंसाका गुब्बारहरूले भरिए। यो केवल आत्मरति थियो। तर, त्यसभन्दा दुखद पक्ष के हो भने अहिले धमाधम डाक्टर बनिरहेका र अब बन्न तम्सिँदै गरेका युवामा गोविन्द केसी बन्न सक्ने हिम्मत छैन। कम्तीमा उनको समर्थनमा जुटेका आन्दोलनकर्मी हौँ भन्नेहरूमा पनि त्यति आँट गर्न सक्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। व्यक्तिगत स्वार्थका साँघुरा छिँडीमा त्यागको सूर्य झुल्किँदैन।
निजी अस्पतालका कारिन्दा बन्न तत्पर एमबीबीएसहरू हुन् वा मास कम्युनिकेसनमा डिग्री लिएर आईएनजीओका कम्युनिकेसन अफिसर ताकिरहेका युवा हुन्। अथवा, कर्पोरेटका ह्वाइट कलर जागिरका पछि लागेका एमबीए र सीएहरू नै किन नहुन्, सबैको एक मात्र ध्याउन्न बजारको सेवा गर्नु हो। र, केन्टकी फ्राइड चिकेन खाएर चेतन भगत पढ्ने आफ्नो स्वतन्त्रताको भरपूर उपयोग गर्नु हो। त्यसैले अब आइन्दा गोविन्द केसीहरूको खोजी निष्फल हुनेछ। बरू कसैले कहिल्यै अनशन बस्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिने नाममा सिंगो शिक्षण अस्पतालकै निजीकरण हुने दिन देख्न धेरै हिउँद कुर्न नपर्ला। सबभन्दा ठूलो बन्न पुगेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले उहिल्यै थालेको निजीकरण अभियान अधुरै रहेको केही विद्वान् नेतालाई ज्यादै खट्केको थियो। अब सो अभियान पूरा गर्न उनीहरूले पाखुरा सुर्किन थालेको बुझ्न ठूलो अक्कल चाहिँदैन। अर्थात्, राज्यलाई बजार अर्थव्यवस्थाको सामान्य म्यानेजर बनाउने उद्यम अब द्रुत हुने सम्भावना छ।
हाम्रा ठूला राजनीतिक दलले बाहिर जे भने पनि मूलतः नवउदारवादलाई नै उनीहरूले आफ्नो वैचारकि मेरुदण्ड मान्नेछन्। त्यसै अनुसारको शिक्षानीतिलाई अझै तदारुकताका साथ अघि बढाउनेछन्। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षाको उद्देश्य झन् संकुचित हुनेछ।
सन् १९९० पश्चात् दक्षिण अपि|mकामा यस्तै अवस्था आएपछि केप टाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन हिगिन्सले एकेडेमिक पि|mडम इन डेमोक्रेटिक साउथ अपि|mका नामको किताब लेखे। उक्त किताबको भूमिकामा त्यहीँका अर्का लेखक जेएम कोएट्जीले भनेका छन् कि उच्च शिक्षाको उद्देश्य अर्थव्यवस्थाले निर्धारण गरेका तात्कालिक आवश्यकताको परपिूर्ति गर्नु मात्रै होइन। नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र तिनले तर्जुमा गरेका गलत नीतिले शिक्षाको व्यापकतालाई खुम्च्याइदिएको उनको ठहर छ।
तर, हाम्रो जस्तो वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय विभेदले गाँजेको मुलुकमा राज्यको शिक्षा नीतिलाई चुनौती दिने वा गलत नीति र कार्यक्रमका बाबजुद साँचो अर्थमा शिक्षित बन्ने मान्छेको संख्या न्यून हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त थोरै संख्याका अपवादबाहेक नेपाली शिक्षितहरू मूलतः बजारका कारन्िदा नै हुनेछन्। अहिले नै लगभग मृतप्रायः भएका इतिहास र राजनीतिशास्त्र जस्ता मानविकी अन्तर्गतका विषय अब अझ किनारा लाग्दै जानेछन्। ऐतिहासिक चेतना, आलोचनात्मक चिन्तन, समाज विज्ञानका सैद्धान्तिक विमर्श सबै निकम्मा साबित गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले गति पाउनेछ। प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमका नाममा विश्वविद्यालयहरू ठिमाहा टेक्नोक्र्याटहरू उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकसित गरिनेछन्। अहिले पनि त्रिवि अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू, काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका एमबीए र ल स्कुलहरू चुस्त देखिनु र त्यसको तुलनामा इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी र राजनीतिशास्त्र विभागहरू भद्रगोल हुनुमा राज्य र राजनीतिक दलहरूको नवउदारवादपट्टिको झुकाव नै मुख्य कारण हो। एकातिर सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई अर्थहीन राजनीतिक लडभीडको मैदानमा रूपान्तरण गरेर आफैँ बदनाम गर्ने र अर्कातिर निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुकूल हुने गरी नीति निर्माण गर्ने दाहोरो चरत्रि छ। हाम्रा नीति निर्माताहरू जसरी बजारको दलाल बनेका छन्, यो क्रमले बढी तीव्रता पाउनेछ।
यसरी राजनीतिक रूपमा सचेत शिक्षित मध्यमवर्गको सानो संख्या अझै घट्नु भनेको व्यक्तिगत लाभहानिको बहीखाता त्याग्न सक्ने मान्छेहरूको कमी हुनु हो। यसको सोझो असर सामाजिक आन्दोलनहरूमा पर्न जान्छ। बरू आन्दोलनका नाममा 'सेता सर्ट' र 'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्'का सस्ता तामझामहरू मात्र बाँकी रहन्छन्।
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित (Feb 2, 2014, Sunday)
8:26 AM Essays No comments
कसैको मृत्युमा, कसैले कुनै पुरस्कार पाउँदा, कोही सामाजिक सरोकारका कुनै पदमा बढुवा हुँदा, नियुक्त हुँदा या निर्वाचीत हुँदा झापाका पत्रिकाहरुले बरु समाचार छाप्न बिर्सिन्छन् तर अनेक संस्था र व्यक्तिसंग जोड जबर्जस्ती गरि गरि ुबधाई र शुभकामनाु छापेर ती मान्छेका अनुहार थोत्रा बनाईदिन्छन् । झापाली पत्रिकाहरुले यस्तो संस्कार विकास गरेको धेरै भएको छैन । तर, पछिल्लो समयमा आएर यो क्रम दिक्दारलाग्दो गरि बढेको छ ।
जमाना विज्ञापनको छ । जुन चीजको विज्ञापन हुन्छ, त्यसको बजारमा माग र मुल्य अधिक हुन्छ । जुन कुराको विज्ञापन हुन सक्दैन, त्यसको न कतै माग हुन्छ, न त्यसको कुनै मूल्य हुन्छ । मान्छेका लागि जति महत्वको भए पनि यदि त्यो चीज छापा र टेलिभिजनहरुमा छैन भने, त्यसको अस्तित्व छ भन्ने कुरामै कोहि विश्वास गर्न तयार हुँदैन । र, कुनै चीज महत्वहीन छ या हानिकारक नै छ भने पनि मिडियामा त्यो छाईसकेपछि, त्यसले राम्रो भाउ पनि पाउँछ र माँग पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले जसलाई बिक्नु वा विकाउनु छ, उसले विज्ञापन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, के के बेच्नु हुन्छ ? को कसबाट बेचिनु हुन्छ या हुँदैन ? के कुराको मौद्रिक मूल्य हुन्छ र के के चाहिँ पैसाभन्दा माथि हुन्छ ? यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न यहाँ कसैलाई फुर्सद छैन । बेच्ने, बेचाउने र विक्रि हुने सानो र ओसिलो वृत्तमा कैद हुँदैछ हाम्रो मिडिया । र, झापाली छापाहरुका हकमा यसका वावजुद केही अरु रोचक कुरा पनि छन् ।
एउटा कुनै खानेपानी उपभोक्ता समिति जस्तो ठाउँमा कोहि आफ्नो वाड वा त्यस्तै सानो क्षेत्रका उपभोक्ताका मतले वीजयी भई अध्यक्ष वा कुनै पदमा निर्वाचित हुन्छ । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनीक भएको भोलिपल्ट देखि लगभग १५ दिन सम्म त्यस नवनीर्वाचीत व्यक्तिलाई अरु अनेक थरि व्यक्ति र संस्थाले स्थानीय पत्रिकाहरुमा बधाई र शुभकामना दिन्छन् । बधाई र शुभकामनाको बाडी नै आउँछ । अरु महत्वका विषयहरु कत्ति छुटेका हुन्छन् तर साउनमा खहरे के उर्लिन्छ र, त्यति उर्लिन्छ बधाई र शुभकामना । एउटा पत्रिकाका सबै पानामा त्यस नवनीर्वाचीतको अनुहार छापिएको हुन्छ । शुभकामनाका ती एकै खाले शब्द र एउटै फोटो पचासौँ साना बक्सहरुमा टाँसिएको हुन्छ । यो क्रम कोहि पुरस्कृत हुँदा, सम्मानित हुँदा वा कसैको निधन हुँदा पनि दोहोरिने गर्छ ।लसतहमा हेर्दा यसमा केहीे खराबी देखिँदैन । अरु कसैको सफलतामा या शोकमा बधाई, शुभकामना वा समवेदना दिनु आँफैमा खराब काम होइन । तर, यसरी छापाहरुमा बाढी नै आउनुको रहस्य के हो ? त्यतापट्टि ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ ।
आखिर यो सब कीन गर्छन मान्छे ? झापाका स्थानीय पत्रिकाहरुमा एउटा समवेदना, शुभकामना वा बधाई छापेको, ठाउँ र आकार हेरी, कम्तिमा पाँच सय देखि बढीमा पाँच हजारसम्म पर्न जाला । आजकलका मान्छेले अरुको सफलता मनाउन वा अर्कोको शोकमा साथ दिन मात्रै पैसा खर्च गर्छ भन्ने कुरामा पूरै विश्वास गर्न गाह्रो छ । त कसरी मान्छे कोहि उपभोक्ता समितिहरुमा र वाणिज्यसंघका शाखाहरुमा निर्वाचीत हुँदैमा, कसैले गाउँस्तरीय प्रतियोगिता जीत्दैमा वा कसैको निधन हुँदैमा पत्रिकामा पैसा तीर्न उद्यत हुन्छ ? र, यस्ता विज्ञापनहरु छपाउने व्यक्ति र संस्थाहरु धेरै दोहोरिने गर्छन, कीन ?
यो बधाई, शुभकामना र समवेदना दिने दिक्दारलाग्दो उपक्रमका केही कारणहरु छन् । कोहि कुनै सामाजिक सरोकारको पदमा आसिन हुन पुग्नु भनेको शक्तिशालि हुनु हो । उसले केही कामहरु गर्ने जीम्मेवारि वा अख्तियारि पाएको हुन्छ । यसलाई मानछेले ुअधिकारुका रुपमा बुझ्दछन् त्यसैले ऊ शक्तिशालि भएको देख्छन् । उसलाई पत्रिकामार्फत बधाइ र शुभकामना दिनु भनेको त्यो शक्तिको पूजा गर्नु हो । त्यसबाट केही लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हेतु उसको महिमा मण्डन गर्दै पत्रिकामा उसका फोटो छापेर सनातनी बधाई र शुभकामना दिने गरिन्छ । यसमा पनि प्रतिष्पर्धा हुन्छ । एउटाले बधाई दिएपछि अब ऊ त्यस शक्तिको नजिक हुन्छ भन्ने भयले अर्कोले पनि अलि ठूलो फोटो र पत्रिकाको अलि राम्रो स्थानमा बधाईका शाब्दिक गुच्छाहरु अर्पण गर्छ । यस्तो प्रतिष्पर्धामा अरु पनि त्यसरी नै सामेल हुन थालेपछि, यो क्रम दिक्दारिलो ढंगले बीसौँ दिन लम्बिएर जान्छ । आफुले कसैलाई अहिले बधाई वा शुभकामना दिइराख्यो भने पछि आफ्नो पनि त्यस्तै बधाई खाने पालो आउँछ भनेर पनि कतिले यस्ता विज्ञापन छपाउने गरेका छन् । मान्छेको यहि लहडलाई समातेर अखबारका प्रकाशक र मार्केटींगका कर्मचारीहरुले कुनै निर्वाचन, अभिनन्दन् र कसैको निधन नछोडी कयौँ संस्था र व्यक्तिहरुलाई ुफलानोलाई बधाई नदिने? शुभकामना नछाप्ने ?वा फलानोको मृत्यु भएकोमा परिवारलाई समवेदना नदिने?ु भन्दै ताकेता गर्न थाल्दछन् । यस्तो ताकेताले पनि बीस पचास अरु बक्सहरु थपिहाल्छन् । यतिमा मात्रै यो कीस्सा टुंिगंइदैन । जो निर्वाचीत हुन्छ वा जो पुरस्कृत हुन्छ, उसले आँफै ुखोइ त मलाई बधाई दिएको ?ु भन्दै अरुबाट आफ्नो विज्ञापन गराउने गरेको पनि देखिएको छ । खासगरि यो रोग झापाका केही पत्रकारहरुमै व्याप्त छ । आफु पुरस्कृत हुन वा सम्मानित हुन कुनै प्रायोजीत समाचार वा लेख लेख्ने केही लोभीपापी पत्रकार छन् झापामा । तिनीहरु पुरस्कार पाउन केही सनातनी खालका, कसैलाई प्रशंसाले उचालेका वा कसैलाई अरुकै खातिर गालि बेइज्जति गरेका सामाग्री छापेर कुनै पुरस्कार वा सम्मान थाप्छन् । पुरस्कार पाइसकेपछि त्यसको प्रचार गर्दै अरु तस्कर, भ्रष्टाचारी वा पैसावालहरुसंग आफ्नै ुबधाईुको विज्ञापन माग्छन् र आफ्नै पत्रिकामा छपाएर कमिसन पनि असुल्छन् । यति मात्रै होइन, कोहि त यस्ता मान्छे पनि छन् हाम्रो जील्लामा, आफ्नो प्रचार कम भएको उनीहरुलाई महसूस भयो भने अमेरीका गएको छोरोको जन्मदिनमा यहाँको पत्रिकामा ुअमेरीकामा अध्ययन गर्दै गरेका हाम्रा सुपुत्रलाई जन्मदिनको शुभकामनाु लेखेर आफ्नै विज्ञापन गर्छन् । लाजको पसारो ।
अखबार चलाउनेहरुका केही अप्ठ्यारा, बाध्यता र आर्थीक कठिनाइहरु होलान् । यीनै अप्ठयारा र कठिनाईका कारण यस्ता खाले विज्ञापनमा भर पर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, मिडियालाई विश्वशनिय बनाइराख्न आफ्ना अप्ठ्याराहरु टार्ने अरु नै उपाय खोज्नु मनासिब होला । हरेक निर्वाचन, हरेक सम्मान, पुरस्कार वा मान्छेका हरेक सफलता र शोकलाई ुमालुमा रुपान्तरण गर्ने यो घातक कर्मलाई मिडियाले प्रश्रय दिनु कति उचित हुन्छ ?
8:16 AM Poetry No comments
भतिजोले बनाएको पक्कि घरको
तल्लो तलाको कुनै एउटाकोठामा
ढोका पछाडि ठोकिएको कुनै काँटिमा
उहाँको कमेज झुन्डिएको धेरै भयो ।
कमेजको गोजीमा एउटा कागजको खोस्टो छ,
जहाँ लेखिएको छ उहाँको नाम,
त्यसलाई तपाईँ नागरिकता पनि भन्न सक्नुहुन्छ ।
कमेजसंगै ढोका पछाडि सुरक्षित त्यस खोस्टोमा अंकीत
उहाँको नाम त्यसरी नै झुन्डिएको पनि बर्षौँ भयो ।
समय पत्रीएर उहाँको अनुहारमा खज्मजिएको छ,
बर्षौँ देखि झुल्किएका घामहरु उहाँका छालामा कालाम्य छन्,
छाना, छाता र घुमबाट चुहिएर उहाँलाई भीजाउने बर्षात
उहाँका आँखामा संचीत छन्, कहिलेकाहिँ तरर खस्छन्,
उहाँले हिँडेर आएको बाटो जस्तै उहाँको ढाड सीधा छैन,
उहाँले गरेका र नगरेका गल्तिका सजाय शरिरभरि
नीलडाम जस्तै भुक्क उठेका नशाहरु छन्,
उहाँको कपालमा पनि समय, घाम र पानी ‘सेडिमेन्ट्स’ बनिसकेका छन् ।
शहरका व्यस्त पसलहरुमा उहाँ अक्सर देखिनुुहुन्छ,
सादा गन्जी, घुर्मैलो रङ्गको हाफपाईन्ट र हात्तीछाप चप्पल
ती उहाँकै हुन्,
गोजीमा राखिएका पैसा र कीन्नु पर्ने सामानको फेहरिस्त,
ती अर्कैका ।
त्यसैले सामान किन्दा कहिलेकाहिँ पैसा अपुग भएमा
पसलेले उहाँको नाम सोद्धैन ।
उहाँ बस्ने घरमा उहाँको कोठा बाहेक घरभरि मान्छेहरु छन्,
कसैका दाजु, कसैका जेठाजु, कसैका बडाबा र कसैका बुढाबा,
घरबाहिर पनि त्यस्ता मान्छे छन्,
तीनलाई तपाईँ उहाँका आफन्त पनि भन्न सक्नुहुन्छ ।
उहाँले नै चील्लो दलेर सुकोमल बनाईदिएका कति आफन्तका हातहरु
उहाँका नशा निस्केका शरिर छाम्न अहिले हच्किन्छन् ।
काका, मामा, दाजु र बुढाबामा खण्डित उहाँको नाम
कमेजको खल्तिमा साँचिएको त्यस खोस्टो बाहेक
कुनै आफन्तको विवाहको निम्तो पत्रमा पनि छैन ।
उहाँका नाम बरु
उहाँले फुटालेका माटाको डल्लाहरुमा छन्,
उहाँका पसिनाले सिन्चित खेतबारी र कान्लाहरुमा छन्,
उहाँले स्याहारेका ती गाईबस्तुका आवाजमा तरङ्गीत छन् ।
ती माटा, खेतबारी, कान्ला र गाईबस्तु अर्कैका नाममा छन् ।
कुनै रातो धनिपूर्जा वा पहाडे कागजमा छैनन्
कुनै पार्टीका कथित ‘टीकट’हरु मा पनि छैनन् ।
उहाँले केहि नजितेर सबै हार्नुभयो,
कुनै कम्युनिष्टको सर्वहारामा उहाँको नाम छैन ।
उहाँको पसिनाको मोल कसैले तिरेको छैन,
कुनै डेमोक्र्याटको सामाजीक न्यायमा उहाँको नाम छैन ।
उहाँको आवाज कतै सीमान्तमा टाङ्गिएको छ,
कुनै सीमान्तकृतहरुको फेहरिस्तमा उहाँको नाम छैन ।
भाइ, भतिजो, बुहारी, दाजु, नाति र नातिनिहरु
छिमेकी, पसले, पार्टी र संगठनहरु
यो भीडमाझ उहाँ पनि हुनुहुन्छ ।
ढोका पछाडि काँटीमा बर्षौँदेखि झुन्डिएको कमेजबाट नस्किएर
त्यो ‘चन्द्रशेखर’ कहिल्यै बाहिर आएको छैन ।